IGibhithe nezingane | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | I-Egypt, Ukuhamba nezingane
Kungenzeka yini ukuhamba nezingane uye kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba? Kungenzeka, kunemindeni emisha ngempela, kepha kukhona nemindeni engazifuneli izingozi. Noma kunjalo, kunezindawo ezinhle lapho noma iyiphi ingane ingahehwa… Isibonelo, iGibhithe. Ngabe unesibindi soku hamba uye eGibhithe nezingane?
Lapho ngineminyaka engu-10 ubudala, ngangithanda imibhoshongo yomoya namanxiwa asethempelini. Ngangibaphupha, ngifunda konke engingakufunda ngalelo zwe lase-Afrika futhi ngiphuphe ngokuba yisazi semivubukulo. Ngakho-ke, izingane eziningi ziyalithanda iGibhithe futhi yebo, kukhona abantu abahambela eGibhithe nezingane. Ake sibone ukuthi kanjani, kanjani futhi kanjani.
1 IGibhithe nezingane
2 Yini ongayivakashela eGibhithe nezingane
Imibuzo yokuqala efika emqondweni lapho sicabanga ngeGibhithe enezingane ihlobene nokuthi singama kuphi, uma sikwazi ukuhamba ngokuzola, yini esingakuphutheli, isimo sezulu esihle kakhulu, imibhalo, imigomo ...
Ukuqala kufanele ukhethe usuku nabahambi bayavuma lokho isikhathi esihle sokuhamba siphakathi kuka-Okthoba no-Ephreli. Ngo-Okthoba isimo sezulu sisafudumele kodwa asiqedi ezingxenyeni eziningi zezwe, kanti UDisemba noJanuwari yizinyanga zokuvakasha kakhulu futhi baningi kakhulu abantu abangakhululeka. Ihlobo limane nje liyinkimbinkimbi, ikakhulukazi maphakathi no-Agasti, ngakho-ke ligweme.
Ukuhambela eGibhithe ngokujwayelekile i-visa iyadingeka nepasipoti esemthethweni ngakho-ke kufanele ubheke ukuthi isivumelwano nezwe lakho linjani. Kune-visa esetshenziswayo esikhumulweni sezindiza futhi ngokujwayelekile emazweni amaningi aseYurophu ihlala izinsuku ezingama-30 futhi ikhokhwa ngokheshi, kepha qaphela, ngakolunye uhlangothi lesi sikhungo sivulekele amazwe athile kuphela, ngakolunye uhlangothi, uma fika ngomhlaba noma ngolwandle i-visa kufanele icutshungulwe ngaphambi kwesikhathi.
Ukukhuluma ngemali iGibhithe yizwe eliheha izivakashi ngakho amakhadi esikweletu amukelwa kabanzi, kodwa noma kunjalo, ungakhohlwa ukuba nama-liras aseGibhithe esandleni ngoba akudingeki uzethembe. Manje, nathi siyazibuza ukuthi ngabe iGibhithe izwe eliphephile ukuhanjwa noma ngabe umama uyakwazi ukuhamba yedwa nezingane. Yizwe lamaSulumane futhi nginabangane abangazange babe nesikhathi esimnandi kakhulu, ngisho nabayeni babo eceleni kwabo.
Kepha kukhona okuhlangenwe nakho kanye nokuhlangenwe nakho ngakho azikho izinyathelo zokuqapha ezeqile (ikakhulukazi maqondana nezembatho, okungukuthi, vala imilenze, amahlombe, akukho lutho olukhululekile). Futhi yilokho IGibhithe ilondolozeka kancane kunamanye amazwe aseNyakatho Afrika.
Akufanele ulindele izindlela ezinkulu zokuphepha kwezokuthutha, amabhande ezihlalo, isibonelo, noma izihlalo zezingane. Kungcono futhi ukuthi ube nakho qaphela ukudla ngoba ayikho inhlanzeko eningi njengakwamanye amazwe. Uma ungafuni ukuthi abancane bahlupheke ngohudo noma ukuhlanza, ngakho-ke qaphela lokho.
Lokhu maqondana nokunakekelwa noma ukucatshangelwa, kepha eqinisweni kunomsebenzi wakho, lona, ​​kodwa omunye wezingane. Engifuna ukukusho ukuthi Kunconywa kakhulu ukuthi abancane bafunde ngeGibhithe ngaphambi kokuvakashela izwe: ukufundwa, amadokhumentari, noma opopayi. Ngisho nokuvakashela imnyuziyamu ezweni lakini elinamagugu aseGibhithe kuyanconywa. Kufanele uvuse ilukuluku futhi ubanikeze imininingwane ukuze, noma kube nemikhawulo yabo, bakwazi ukuvumelanisa ukuhambela okuzayo.
Yini ongayivakashela eGibhithe nezingane
Singaqala ngokukhuluma ngezifunda: ICairo, iValle del Niño eningizimu, iDesert ngasentshonalanga, ogwini loLwandle Olubomvu. Ngamunye unikela ngezakhe futhi lapho uhamba nezingane umqondo uwukuthi yenza ukuxuba ukuze ungadluli ezinganeni ezinomlando omningi kakhulu, iminyuziyamu eminingi kakhulu, amasiko amaningi. Singakhuthaza futhi sanelise ilukuluku lengane futhi ngesikhathi esifanayo siyenze ibe nesikhathi esimnandi.
ESigodini SaseNayile kukhona amathempeli futhi uhamba emfuleni, ogwadule omkhulu negolide izindunduma namakamela agibele, nasogwini loLwandle Olubomvu izinketho zidlulela kufayela le- ezemidlalo zamanzi. Lapha kufanele uhambe nabafundisi ababhalisiwe kuphela, uhlole ukuthi umshwalense uhlanganise ini nokuthi yini engekho, ube ne-sunscreen eningi esandleni futhi ungashayi phansi emahoreni ambalwa ngemuva kokufika eGibhithe.
Ogwadule kukhona i- ISiwa oasis, indawo ephelele yabancane, kanye nezinsalela zasendulo zomkhomo ezingabonakala UWadi Al Hittan noma ukugibela ikamela kusuka ogwini olusentshonalanga yeLuxor. Ungacabanga yini ukuthi abancane bakho benza konke lokhu?
Ake uzicabange behamba phansi Iphiramidi Elikhulu, ngaphakathi uma ungeyena owe-claustrophobic, uvakasha amahholo amahle kakhulu Umnyuziyamu waseGibhithe ngayo yonke ingcebo yalo noma ukubona izidumbu zomzimba ze- Isigcinamagugu Sokumbumbuluzwa, into abangeke bayikhohlwe ngaphandle kokungabaza. Vele, lapho uvakashela amapiramidi kungcono ukuhamba ngeqembu futhi ube nomhlahlandlela Njengoba kunabathengisi abaningi, kuyakhathaza, futhi ungathola uvalo ngokulawula izingane futhi uzame ukungakhokhi lutho kuwo wonke umuntu okucela imali. Konke ngasikhathi sinye.
Ukwenza ukuvakasha okuqondisiwe kuqinisekisa ukuthi bangakuhlelela isithombe noma ukugibela ikamela. Yebo ukhokhela yonke into, kepha uyakhokha futhi ungakhathazeki ngokuxokozela. I- izindiza zebhaluni lomoya oshisayo Ziyi-oda yosuku lapho uvakashela eLuxor. Baphephile? Yini engikwaziyo! Abasekhweni lami bakwenzile nyakenye, bengumngani eminyakeni embalwa eyedlule ... kodwa futhi kuyiqiniso ukuthi kungekudala esikhathini esidlule omunye wawa, yeka itshe ... Kuya ngawe.
Ungangeza futhi kufayela le- gibela felucca, isikebhe seNayile, okungenzeka sitholakale eCairo, eLuxor noma e-Aswan, sibe ngcono ntambama, ekushoneni kwelanga; noma isitimela sokuqala ukuya eTanta noma ithilamu eliya e-Alexandria. Ogwini loLwandle Olubomvu wonke umndeni ungahamba, uhambe ngesikebhe, uhambe ngesikebhe noma yazi iSuez Canal ngisuka ePort Said bese ngibona lezo zindiza ezinkulu, ezinkulu, ziwela.
Yonke le misebenzi ingenziwa buthule nezingane futhi njengoba ubona, angikhulumi ngezikwele noma amapaki wokuzijabulisa noma izikhungo zokuthenga. Njengoba ukwazi ukubona, uhambo oluya eGibhithe nezingane kungenye into. Akuyona iDisney, yehlukile. Ekugcineni, umbuzo wokuthi ngabe Kuphephile noma cha ukuya eGibhithe nezingane? izimpendulo ezintathu zikakhonkolo: yebo, cha, kuya. Kuyiqiniso lokho kukhona ukuhlaselwa kwamaphekula, yebo, ngoDisemba wangonyaka odlule ibhomu laqhuma emzileni owaziwa kakhulu wabavakashi, ngokwesibonelo, kepha abantu beza bahambe ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke ngicabanga ukuthi impendulo kuya.
Kuya ngalokho ofuna ukukuzwa futhi kuya ngomzuzu wezepolitiki ezweni. Uma ucabanga ngalokhu, kuyisinqumo sakho. Sengike ngaya eJapan kahlanu futhi udadewethu uhlala engitshela ukuthi iTokyo ilinde i- mzwandile ukuzamazama komhlaba. Nami ngihamba ngendlela efanayo. Nginqamula iminwe yami, ngithathe izinyathelo zokuzivikela, futhi ngizijabulise. Ucabangani?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Afrika » I-Egypt » IGibhithe nezingane
Izindawo ezinhle kakhulu eSpain
Izindlu zasemakhaya eGalicia, amathiphu nemibono yokuhlala